SIDA LOO DHISO AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO EE GACMAHAAGA - QALABKA DABOOLAYA
Ugu Weyn Ee Qalabka daboolaya
Ku rakibidda aqalka dhirta lagu koriyo ee dalka, talooyin iyo khiyaamo
Ka hor intaadan sameynin aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato hawlaha aad u baahan tahay. Miyaad kori doontaa geedka geedo yar yar, miyaad rabtaa in aad u guurto si aad u hesho kobcin buuxda, ama waxaad kor u qaadeysaa shooladaha duubista filimka, markaa adoo hagaajinaya kuleylka aqalka dhirta lagu koriyo. Waxaa laga yaabaa inaad kaliya la yaaban tahay sida loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo.
Halkee laga helaa aqalka dhirta lagu koriyo
Iskuul-kasta waa muhiim dusha sare, dusha sare iyo dillaacsan. Isku day inaad gasho aqalka dhirta lagu koriyo meesha uu ka ilaalin doono dabaysha guri, xayndaab ama dhir, sababtoo ah wax kasta xitaa jawi yar ayaa saameyn doona heerkulka gudaha.
Diyaarso aqalka dhirta lagu koriyo si ay dabayshu ugu dhacdo derbiga derbiga - tani waxay u oggolaaneysaa inay si fiican u hawo qaloociso.
Ma taqaanaa? Waxaa fiican in aan dhigo aqalka dhirta lagu koriyo dhagaxyada, maadaama tani ay ka dhigeyso rakibidda boogaha xejinta.
Sida loo doorto qaabka iyo cabbirka aqalka dhirta lagu koriyo
Cabbirka iyo qaabka aqalka dhirta lagu koriyo waxay ku xiran tahay:
Noocyada dhirta ee lagu kori doono aqalka dhirta lagu koriyo;
awoodaha wax-qabadka - qalabka dhismaha ee loo baahan yahay aqalka dhirta lagu koriyo, maalgashiga intaa ka badan waxay u baahan doontaa.
Waa muhiim! Xasuuso, aqalka dhirta oo aad u ballaaran - maaha wax la taaban karo!
In lagu koriyo isku mid ma kori doono dhirta leh tilmaamayaasha kala duwan ee agrotechnical. Tusaale ahaan, ma kori kartid yaanyada iyo qajaarka, sababtoo ah yaanyada waxay u baahan yihiin ciid wanaagsan oo qoyan iyo hawada qoyan, iyo qajaarka, liddi ku ah, waxay door bidaan cimilada dildilaaca. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la tixgeliyo hababka iftiinka iyo heerkulka kala duwan ee geedaha.
Waxaa jira naqshado badan oo lagu koriyo oo kala duwan. Waxaad dhisi kartaa aqalka dhirta lagu koriyo qaab ah guddi, teendho, geocupol, kore, iyo wixii la mid ah. Dabcan, aqalka dhirta ugu fudud ee leh gacmihiisa ayaa ah saqaf sareysa iyo derbi caadi ah. Noocyada aqalka dhirta lagu dhejiyo ayaa si sahlan loo garaacaa dhalooyinka iyo filimada. Si aad u siiso dhismaha, derbiyada waxaa lagu daboolay albaabyo alwaax ah.
Doorashada qalabka iyo qalabka loogu talagalay abuurista lagu koriyo
Sannado badan, koriyo-dhaqameedku waxay noqdeen kuwo lagama maarmaanka u ah arimaha dalka, sababtoo ah, iyaga oo uga mahadcelinaya, khudaarta iyo miraha waxaa lagu kori karaa illaa sanadka oo dhan. Sida ay sheegeen bannaanka u khibrad leh, qalabka ugu fiican iyo la awoodi karo ee lagu koriyo - polycarbonate.
Guryaha xilliga kuleylka leh gacmahaaga ka timaada polycarbonate waxay bixin doontaa qadar ku filan oo iftiin leh, taasina waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee dhirta sii kordhaya. Maqnaanshaha hawada awgeed, waxa dheeraadka ah kuleyliyaha kuleylka ah. Aqallada dhirta lagu koriyo ee polycarbonate waxay dhaaftaa muraayadaha dhalooyinka iyo filimada filimka marka la eego kuleylka.
Sida loo aasaaso aasaas
Ka hor inta aanad samaynin aqalka dhirta lagu koriyo oo la dhejiyo polycarbonate, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso aasaas u ah. Waxay u adeegi doontaa taageerada qaabka waxayna awood u yeelan doontaa in ay ilaaliso dhirta koray ka soo jeeda saameynta hab-dhiska deegaanka iyo microclimate. Aasaasku wuxuu noqon karaa:
Timber. Saldhigga barka - waa kan ugu fudud ee ugu jaban saldhigga aqalka dhirta lagu koriyo. Waxaad u baahan doontaa bar, sariir la dareemo iyo dhejiyeyaasha lagama maarmaanka ah.
Ma taqaanaa? Saldhig noocan oo kale ah ayaa si sahlan loo burburin karaa oo loo dhisi karaa si waafaqsan mid cusub. Hase yeeshee, noloshooda shaqadu maaha in ka badan lix sano.
Biiri. Sand waxaa lagu shubaa godad qoday, oo ku shubay xalka a la taaban karo, ka tago godad for shaxanka. Qoto dheer ee haraaga waa in aan ka badnayn 40 cm.
Tuur taas oo ah analogooga ah ee la taaban karo. Waxa kale oo loo isticmaali karaa sida kor u kicinta aasaaska aasaasiga ah. Waxa uu dhisay, sida la taaban karo, waxa ugu muhiimsan waa in si sax ah loo calaamadeeyo goobta.
Meelaha la taaban karo. Asaaskani wuxuu ku fiican yahay meelaha ay hayso qoyaan badan sababtoo ah sifooyinka biyuhu ka baxayaan.
Waa muhiim! Xaaladaha cimilada daran ama dhisidda aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro salkiisa iyagoo leh xumbo ama xumbo.
Dhismaha aasaaska blockka waxaad u baahan tahay:
Ku calaamadee qorshaha.
Iska xoqa jarjar.
Daboolka hoose ee ceelka leh quruurux ku saabsan 10 cm.
Ku rakib dhuubyada qashinka aan la cayimin. Hoos u dhig heerkulka dhismaha.
Ku daawee kala-goysyada la taaban karo.
Abuur sheyga aqalka dhirta lagu koriyo
Wixii shaxda waa ka fiican in la isticmaalo profile galvanized. Isku duwo walxaha T-shaped iyo ku soo dhejisid saldhigga nalka.
Dhisidda qaabka loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u xisaabiso garoonka garoonka iyo taakulaynta dheeraadka ah. Haddii ay jiraan dabayl xoog leh ama roobab culus, feeraha adag waxay ku siinayaan xasillooni dheeraad ah.
Guryaha lagu qurxiyo waxay ku sameeyaan adigaaga
Si aad u garaacdo aqalka dhirta ee lix mitir, waxaad u baahan doontaa afar wareeg oo polycarbonate ah. Waxaa fiican in la gooyo polycarbonate leh jigsaw koronto. Qaado tixgelinta farqiga udubdhexaadka ah ee qaybaha kaynta iyo xajmiga qafiska ee feeraha.
Kadib markaad diyaariso xaashida polycarbonate, gali gabayada fayadhawrka oo ku xir nalka. Isticmaal qalabka kuleylka - waxay ka ilaalinayaan wax ka bedelida berrinka. Iyada oo la adeegsanayo cajalad bandhiga ah - waxay xiraysaa xirmooyinka. Ka baxsan ujeedadaas, cajaladda aluminium-self-adhesive adapted. Ha ilaawin inaad godka ku shubtid profile - tani waxay ka hortagi doontaa isku dhafka biyaha ee kondhiya biyaha gudaha gudahooda.
Sida loo qalabeeyo aqalka dhirta lagu koriyo
Markaad dhisto aasaaska oo aad sameysatid xargaha, weli wali ma helin aqalka dhirta lagu koriyo, sababtoo ah nidaamkeeda gudaha ayaa ah geedi socod muhiim ah.
Iyada oo ku saleysan cabbirka aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato inta sariirood ee aad heli doonto. Inta u dhaxeysa sariiraha waxa fiican inaad sameyso jidad leben ama boorso: qalabyada noocan oo kale ah ha qulqulin haddii biyuhu ku dhacaan inta lagu jiro waraabinta. Si aad u abuurto sariir sarreysa, isticmaal curbsiyada.
Waxaa fiican in la iibsado ciidda sariiraha, maadaama la nadiifiyo infekshannada kala duwan iyo cadayna leh walxo waxtar leh. Intaa waxaa dheer, waxaad iibsan kartaa ciidda khaaska ah kaas oo noqon doona mid ku haboon nooca geedka.
Guryaha lagu dhejiyo gacmahaaga ayaa ku farxi doona. Laakiin ugu fiican dhammaantood, haddii aad horay go'aan u gaartid waxa aad ku kori doontaan iyo nooca ay kugu haboontahay.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qalabka daboolaya 2019